कैलाली ह”त्या प्रकरणको पछाडि बाहिरियो कसैले न’सोचेको र’हस्य ! आखिर के हो त बा’स्तबिकता ? (भिडियो सहित हेर्नुस) - Narayani Dainik
काठमान्डौ- जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जिल्लाको जानकी गाउँपालिका–९ घर भएका २५ वर्षीय अर्जुन दासको ह,त्यामा संलग्न भएको आ,रोपमा एक जनालाई प,क्राउ गरेपनी अ,नुसन्धानका लागि निय,न्त्रणमा लिएको बताइएर नाम भने सार्वजनिक गरेको छैन प्रहरिले । शनिबार टाउको एका तिर जिउ अर्को गरी ह,त्या गरिएको अवस्थामा अर्जुन दासको श,व भेटिएको थियो ।
अर्जुन दासको ह,त्या पछि एक मनोज नामको व्यक्तिले पठाएको फोन संवादको अडियो मृ,तककी पत्नी धर्मादेवी दासको फेसबुक म्यासेन्जरमा भेटिएको थियो । तेही अडियोलाई आधार मानेर प्रहरिलाई अनु,सन्धान गर्न सजिलो भएको प्रहरिको भनाइ छ ।
स्थानीयले भनेअनुसार अर्जुन दासलाई उनका साथीहरूले घरमा आएर लिएर गएका थिए।साथीहरू आएर घरबाट निस्किएका अर्जुन दास त्यस दिन बेलुका घर फर्केनन्। त्यसपछि घर परिवारले सामान्य रुपमा खोजीतलास त गर्‍यो तर उनी फेला परेनन्।त्यस पछि अर्जुन ह’रा’एको भोलिपल्ट उनी अमरावती सामुदायिक बनभित्र मृ”त अ’व’स्थामा फे”ला परेका थिए।
फोन रेकर्डमा घाँ’टी र श’री’र अ’ल’ग पारेको बताएका छन् । ह’त्’या लागूऔषधको कारोबारसँग जोडिएको प्र”हरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ । दास लाई रुखमा बाँ’धेर न’ग्न बनाइएको र त्यसपछि वि”भ”त्स त’रिकाले ह”त्या गरेको खुलेको छ
उनले आफू बैंगलोरका लागि हिंडेको बताएका छन् । घ”ट”नामा संलग्न समूह नै बैंगलोर जान लागेको भनेका छन् । घ’ट’ना’का बेलामा विभिन्न व्यक्तिसँग समेत वि’वा’द भएको नामसहित उल्लेख गरेका छन् । फोन रे’क’र्ड’मा धेरै युवाहरुको आवाज सुनिएको छ ।यता अर्जुन दासकि श्रीमती भन्छिन, “बेपत्ता भएको राती घरमा दुइजना मान्छे छिरे । साथीहरूले नै का’टे’र मा’रे’का हुन मेरो श्रीमानलाई